Ny tantaram-pitiavan'i Neymar tantaram-piainana tsy hita isa
Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football any Brezila Ny tantaram-pitiavan'i Neymar tantaram-piainana tsy hita isa
Nohavaozina farany teo Enga anie 24, 2020
Ny Neymar Biography Facts dia manolotra fitantarana feno momba ny tantaran'ny fahazazany, ny fiainana voalohany, ny ray aman-dreny, ny raiam-pianakaviana, ny vady, ny zaza, ny fiainana manokana ary ny fomba fiaina. Ny marina dia omenay anao ny famotopotorana feno momba ny tantaram-piainany, nanomboka tamin'ny andron'i Neymar tamin'ny voalohany ka hatramin'ny nahombiazany.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony sy ny andiam-panendrena azy ho an'i Ballon d'Or. Na dia izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra betsaka momba ny Bio Bio Neymar Jr izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Tantara Neymar Ankizy:
Neymar da Silva Santos Júnior dia teraka tao amin'ny 5th ny Febroary 1992 ao Mogi das Cruzes, São Paulo, Brezila. Teraka tamin'ny rainy, Neymar Santos Sr (mpilalao baolina kitra), ary Nadine Santos reniny.
Nandritra ny vanim-potoana efa-bolana lasa izay dia niaina tamim-pahagagana ny loza nianjady tamin'ny fiara i Neymar. Ny fianjerana fiara nahafaty olona dia naterak'ilay fiara tsy mataho-dalana izay tsy nitsahatra nandositra tampoka tendrombohitra iray tany amin'ny fiaran'ny fianakaviany raha handeha hamangy havana maromaro.
Soa ihany, Baby Neymar izay nijanona teo amin'ny sezary kely napetraka teo amin'ny sehatra ambadiky ny fiara dia tafavoaka tamin'ilay loza ary navoaka tsy nahy.
Neymar - Mitombo taona
Raha mijery ny fandehanana amin'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mino fa tsy mbola nanana rosy tanora izy. Raha ny marina, ny havany dia ratsy mahantra tamin'ny fotoana nahaterahany. Ny rainy, Neymar Sr, dia tsy maintsy niasa asa maro mba hanohanana ny fianakaviany. Na izany aza, afaka nankalaza ny fitsingerenan'ny nahaterahan'i Neymar izy ireo.
Noho izany, rehefa nianatra taona i Neymar (sary etsy ambany) dia nosoratana tao amin'ny sekoly iray izay mifanaraka amin'ny ilany. Nody tany an-trano izy taorian'ny fianarany, tsy nanana herinaratra ny fianakaviany, satria tsy afaka nanome vola azy ireo izy, fivelarana iray izay nahatonga an'i Neymar sy ny zandriny vavy hametraka labozia ho loharanom-pahazotoana hianarana.
Raha niady mafy i Neymar Sr mba hanohanana ny fianakaviany, dia nahita an'i Neymar Jr zanany izy ary nanangana ny talentany tamin'ny baolina kitra. Tsy sahala amin'ny filalaovana hafa ho an'ny mpilalao baolina kitra, ny asan'i Neymar amin'ny baolina kitra dia nesorina tao amin'ny kianjan'ny basketball iray fa tsy ny kianja filalaovana.
Nianatra namaky teny izy Futsal ary tonga lafatra ao amin'ny lalao indostrialy izay misongadina amin'ny baolina baolina mavesatra sarotra izay tsy manakana betsaka. Noho ny fisehoan-javatra sy ny fameperana nataon'ilay lalao izay nilalao tao amin'ny kianjan'ny baolina kitra, dia afaka nianatra sy nampivelatra ny fahaiza-manaony mahatalanjona nasehony androany amin'ny kianja baolina kitra i Neymar.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary nalaza izy teo anivon'ireo namany teny an-dalambe izay nalainy ny fahaizany. Ny Neymar Sr. dia manaiky ny fahaiza-manaon'ny zanakalahiny ary nanokana fotoana vitsivitsy niala ny fandaharam-potoanan'izy ireo izay sahirana mba handeha tanora Neymar manoloana ny làlan'ny profesionista.
Momba ny ray aman-drenin'i Neymar:
Ho an'ny maro, ny génetik an'ny Neymar Jr ny ray aman-dreny dia mitaky fitondran-tena tonga lafatra ho an'ny zanaky ny zaza iray. Ireo karazana biolojika tsara dia tsara izay nahatonga ny karazana baolina tsy fahita firy.
Matetika i Neymar dia mahazo fanorohana roa avy amin'izy ireo alohan'ny lalao futsal sy lalao. Tsy niova mandrakizay ny fitiavana ary tsy nahitam-bokany izany, na dia teo aza i Neymar tao Santos ny klioban'ny matihanina voalohany (sary etsy ambany).
Taorian 'ny oroka toy izany, dia matetika no nilaza taminy ny ray aman-dreniny;
... ''Angamba, ny hoavinao sy ny sainao dia afaka nanome ray aman-dreninao tsara kokoa noho izahay. Saingy tsy misy zavatra afaka nanome antsika zanakalahy tsaratsara kokoa noho ianao. Tianay ianareo zanaka, ianao no tsara indrindra. Ankehitriny. MANDEHANA AZO AMINAREO! "...
Biology Neymar - Andraikitra ao anatin'ny haren'ny mpanazatra an'ny Santos Head:
Raha mbola tany Santos i Neymar, dia nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny zava-nitranga iray izay nitarika ny kitapon'ny mpanazatra klioba Dorival Junior. Nanomboka ny zava-nitranga rehefa nanakana an'i Neymar tsy handoa sazy an-tranomaizina i Dorival Junior. Ny baolina dia nomena ny mpilalao hafa antsoina hoe Marcel, fivoarana izay nahatonga an'i Neymar ho tezitra. Rehefa niverina tany amin'ny banky izy dia nanohitra mafy ny fanapahan-kevitry ny mpanafatra fa tsy maintsy nosakanan'ny mpandidy azy izy.
Neymar kosa dia niala tsiny noho ny fitondrantenany tsy mendrika, saingy nanapa-kevitra ny hanasazy azy ny mpanazatra amin'ny alàlan'ny famelana ny ekipan'ny klioba mandritra ny matematika kilasy amin'ny Corinthians.
Ny filankevi-pitantanan'ny klioba izay nankafy an'i Neymar dia tsy faly tamin'ny fanapahan-kevitr'i Dorival Junior ary nanapa-kevitra ny hamongotra azy. Ny fandroahana an'i Dorival dia nanaporofo fa i Neymar dia tsy mpilalao anton-dian'ny klioba fotsiny fa noheverina ho ilay olom-boafidy izay hamonjy ny baolina kitra Breziliana.
"The Toiss" dia namana naman'i 4 nandritra ny androm-piainan'i Neymar izay nanampy tamin'ny fanatsarana ny asany tamin'ny lalao baolina kitra. Manatanteraka asa fototra ho an'ny naman'ny olo-malaza izy ireo, anisan'izany ny fangatahana fangatahana fanjairana sy ny autographs mamela an'i Neymar hifantoka amin'ny toerana.
Antony ahatsiarovana ny anarana:
Neymar dia nomena anarana hoe 'Tompon'ny alina' avy amin'ireo mpiara-mianatra aminy ao amin'ny efitrano fiandrasana an'i Barça noho izy manana ny fironana hankafizany ny fiainana, indrindra rehefa tonga amin'ny alina miaraka amin'ny "The Toiss".
Ny kintan'ny Breziliana dia tia ny anaram-bosotra izay lohatenin'ny Batman. Nanao izany izy tamin'ny lanonana 'Halloween' tao amin'ny 2015 rehefa niakanjo tao anaty saron-doha Batman niaraka tamin'ny tratran'i Dracula izy.
Miara-miasa amin'i Neny:
Raha ny hafa dia mitondra ny sipany amin'ny Parties, manao ny mifanohitra amin'izay i Neymar. Maka ny mamanany izy. Araka ny nambarany,
"Nihazakazaka ny fianakaviana i Neny. Izy no karazana olona izay tsy misy azy, very isika. Manohana antsika izy. Tena nanakaiky ny reniko aho rehefa nianatra tany am-pianarana ny zandriko ary i Dada nandeha lavitra. "
Momba ny Vadin'i Neymar:
Nandritra ny zatovo 19, Neymar dia niombon-kevitra tamin'ny ankizivavy Carolina Dantas izay nahabe ny bevohoka.
Niteraka zazalahy iray antsoina hoe 'Davvi Luca' izy. Nijoro teo anilany nandritra ny fitondrany vohoka i Neymar ary nijanona niaraka taminy taorian'izany. Raha maro no mino fa ny fiterahana nataon'i Davvi Luca dia nanambatra ny fifandraisan'izy ireo, vitsy ihany no mahatsapa fa manana fo feno fitiavana sy be fiahiana i Neymar.
Momba ny Zanak'i Neymar:
Ilay mpilalao baolina kitra breziliana dia tia ny zanany hatramin'izay nahaterahany. Ny ampahany lehibe amin'ny fanakaikezany dia mitaky ny filalaovana mandro sy ny zanany lahy.
Tamin'ny taona 3, i Davvi Luca dia efa nampiasaina hitifitra baolina kitra nataon'ny dadany izay mampianatra azy. Neymar dia nandray an'i Davvi Luca tamin'ny fanatontosana dingana bebe kokoa tamin'ny fisoratana anarana azy tao amin'ny fianarana baolina kitra baolina kitra FCB Escola ao amin'ny 2017,
Ny Taom-poko Mohawk:
Neymar no voalaza fa ilay mpilalao Breziliana voalohany mba hanamboatra ny mofomamy ao Mohawk.
Neymar Mohawl Style. Bilaogy ho an'ny Trends menoron'ny lehilahy
Amin'izao fotoana izao, saika ny tanora mpankafy baolina kitra any Brezila no manamboatra ny fomba fitenenan-damba amin'ny fomba hanoratana ny maherifony. Ankoatra izany, izy no mpilalao baolina kitra Breziliana voalohany ihany no nasongadina teo anoloana ny Time Magazine Mahery Indrindra.
Fifandirana any Barcelona:
Ny Breziliana dia diso fanantenana tanteraka tao Neymar noho ny antsoin'izy ireo hoe 'Hetsika mora FC Barcelona '. Niorina tamin'ny lazany, ny laza sy ny fanoheram-pahaizana ao an-toerana, nanaiky ny vola 57 tapitrisa euros i Neymar sy ny kliobany izay nahita azy nifindra FC Barcelona. Izany ho an'ny maro dia hita ho endri-pahaverezana ho an'ny fifampiraharahana.
Nohazavaina ny Fivavahan'i Neymar:
Ny tena kristiana ary ny 100% an'i Jesosy Kristy:
Neymar dia mino an'i Jesosy Kristy hatramin'ny fahazazany. Tena tia mampiasa Banner (100% Jesosy).
Amin'ny ankapobeny, ny finoana an'i Neymar dia tena marina sy mampihatra finoana. Hitany ny fiainana ho toy ny zavatra mety hahatonga ny olona tsirairay hametraka an'i Jesosy Kristy ho lohalaharana amin'ny zavatra rehetra. samy Gabriel Jesus ary Edinson Cavani Manahaka an'i Jesosy tia ny fiainana toa an'i Neymar
Neymar Biography- Mitsangàna tantara malaza:
Neymar dia iray amin'ireo mpilalao baolina tsara indrindra ao Sao Paulo, Brezila talohan'ny taona 11. Ny samba nentin-drazana samba sy voajanahary samba no nahatonga azy ho safidy tsara indrindra nataon'ireo mpikarakara baolina an-dalambe izay nahatonga azy ho toy ny lalao an-dalambe.
Nahazo fahatakarana mahatalanjona izy teo amin'ny tora-pasika sy ny lalao baolina kitra mafy noho ny haavony, ny fahaiza-manaony ary ny fahitana mahavariana ny tongotra malemy tongotra havia mba handefa baolina ho amin'ny tanjona lavitra lavitra. Hitan'i Neymar izany tamin'ny lalao baolina an-dalambe mba hilalao baolina kitra.
Neymar dia nohazavaina avy eo ary notadiavin'ny mpikaroka avy any andrefan'i Ham, Real Madrid ankoatra ny klioba hafa izay nolaviny mba hilalao amin'ny klioban'ny klioban'ny firenena Santos izay toerana ambony kokoa. Tao amin'ny 2011, nomena toerana iray tao amin'ny ekipam-pirenen'i Brezila izy avy eo ny lehiben'ny Coach, Luiz Felipe.
Nofehezin'ny FC Barcelona tamin'ny 27 ihany izy tamin'ny faranyth ny May 2013 ho an'ny 57 tapitrisa dolara. Efa-taona taty aoriana, nosoniavin'ny PSG izy noho ny saram-pandefasana fandraketana $ 263 tapitrisa. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Neymar Junior sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Latif 25, 2019 Ao amin'ny 10: 28 am
Nanao ahoana ny fiverenany amin'ny tena madrid en 2019 sy manao ny baolina d na ny coupe du monde iray aime tres bien neymar sy ny fils ary izaho ve dia ho lasa ny petit neymar jr